चितवन, २४ माघ । चितवन जिल्लामा ५६ जना कुष्ठरोगी थपिएका छन् । स्वास्थ्य कार्यालय चितवनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा सो सङ्ख्यामा रोगी थपिएका हुन्। ६८ औ विश्व कुष्ठरोग दिवसको सन्दर्भमा शुक्रबार यहाँ...
निन्द्रामा किन हिँड्छन् ?
काठमाडौं । कोही मानिसहरू सुतिरहेको बेला उठ्ने, अन्यत्र ठाउमा गएर बस्ने र यताउता हिड्ने जस्ता अनौठा क्रियाकलाप गर्छन । उनीहरूलाई कुनै पनि कुरा थाहा हुँदैन । उनीहरू गहिरो निन्द्रामा परेका हुन्छन् । यस्तो असामान्य...
नेपालमा आएको कोरोना खोपबारे के भन्छन् डा. रवीन्द्र पाण्डे ?
काठमाडौं, ११ माघ । भारत सरकारले नेपाललाई १० लाख डोज कोरोना खोप ‘कोभिसिल्ड’ प्रदान गरेको छ । तर, भारतमा यो खोप लगाएकामध्ये केही मानिसमा देखिएको साईडइफेक्टका कारण नेपालमा यसको प्रभाव कस्तो रहला भन्ने आम...
काठमाडौं । महिनावारीका बेला महिलालाई पीडादायी हुनेगर्छ । महिलामा थकान, कमजोरी, पेट दुखाइ आदि कारणले समस्या बनाउने गर्छ । महिनावारीको समयमा व्यायाम गर्दा शारीरिक फिटनेस, हृदयाघात नियन्त्रण हुने, स्ट्रोक, अर्थाइटिस, ओस्टियोपोरोसिस, मधुमेहजस्ता समस्या नियन्त्रण...
कोरोनाको त्रास नसकिदै फैलियो नयाँ रोग ‘डिजिज–एक्स’को त्रास !
काठमाडौं । संसार यतिबेला कोरोनाभाइरससँग जुधिरहेको छ र थुप्रै देशमा यो विरुद्ध खोप अभियान सुरु गरिएको छ । यसैबीच खतरनाक इबोला भाइरसको खोजी गर्ने वैज्ञानिकले संसार चाँडै नै नयाँ रोगका लागि पनि तयार हुनुपर्ने...
जाडोमा चाया कसरी हटाउने ?
काठमाडाैं । टाउकोमा छालाका कोष मर्ने र नयाँ पलाउने क्रम निरन्तर चलिरहन्छ । यस्तो वेला टाउकोमा सेता, मसिना फुस्रा दाग देख्छिन् जसलाई चाया भनिन्छ । सामान्य अर्थमा भन्नुपर्दा चाया पर्नुको मुख्य कारण सरसफाइ गर्नुपर्ने हुन्छ ।...
काठमाडौं, ७ मंसिर । एकपटक कोरोना भाइरस सङ्क्रमित भएकाहरुमा कम्तीमा ६ महिनासम्म दोस्रो पटक सङ्क्रमण हुने सम्भावना नभएको एक अध्ययनले देखाएको छ । बेलायतको अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीले गरेको अध्ययनअनुसार एक पटक कोरोना सङ्क्रमित भएको व्यक्ति...
काठमाडौं, ६ मंसिर । सरकारले १–२ घण्टाभित्रै कोरोना संक्रमणको परीक्षणको रिपोर्ट दिन सक्ने प्रविधि भित्र्याएको जनाएको छ । स्वासथ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.जागेश्वर गौतमले नेपाली रेडियो नेटवर्कमा पत्रकार ऋषि धमलासँग शनिबार बिहन अन्तर्वार्ता...
काठमाडौं, १ मंसिर । एउटा नयाँ खोपले कोभिड–१९ बाट झन्डै ९५ प्रतिशत सुरक्षा दिने प्रारम्भिक तथ्याङ्कबाट देखिएको अमेरिकी कम्पनी मोडेर्नाले जनाएको छ । फाइजर कम्पनीले विकास गरेको खोपका नतिजाहरू सार्वजनिक भएलगत्तै आएको पछिल्लो परिणामबाट...
लन्डन । कोरोना भाइरसविरुद्ध पहिलो खोप तयार भएको छ । विश्वलाई तहसनहस बनाइरहेको यो भाइरस नियन्त्रणको उपाय निकालेको दाबी गर्दै बेलायतका वैज्ञानिकले ‘विज्ञान र मानवताका लागि महान् दिन’ भनेका छन्। खोप लगाएकामध्ये ९० प्रतिशतभन्दा...
रिगंटा किन लाग्छ ?
काठमाडाैं । अत्यधिक टाउको दुख्ने, छात्ती दुख्ने, टाउकोमा चोट, उच्च ज्वरो, मुटुको धड्कन बढ्ने, बेहोस हुने, सास फेर्न गाह्रो हुने, गला लाग्ने, हेर्न वा बोल्न समस्या हुने, बान्ता हुने र कमजोरी महसुस हुने लक्षण...
टेकु अस्पतालले धरौटी नलिई कोरोना संक्रमितको उपचार गर्ने
काठमाडौँ, १६ कात्तिक । टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरूवा रोग अस्पतालले कोरोना संक्रमितको बिना धरौटी उपचार गर्ने भएको छ । आइतबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्देशनपछि अस्पतालले धरौटी लिने प्रावधान हटाउने भएको हो ।आजै...
एमाले महाधिवेशन : आलोचनाको नाममा निजी जीवनलाई आघात पुर्‍याउन नपाइने
एमाले महाधिवेशनः सहमतिमै नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै आइतबार सकिने
प्रतिस्पर्धाबाट पछि नहट्ने भन्दै भीम रावलले माग्न थाले भोट
एमाले महाधिवेशन : सहमति नभएको पदमा मात्रै चुनाव हुने
नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनको जोखिम नेपालमा पनि छ : स्वास्थ्य मन्त्रालय